Ogaden News Agency (ONA) – Sacuudiga & Masar oo Xiisad Siyaasadeed Ay Ka Dhex Qarxeen.
Sacuudiga & Masar oo Xiisad Siyaasadeed Ay Ka Dhex Qarxeen.
Posted by ONA Admin	/ November 9, 2016
Boqortooyada Sacuudiga oo horey taageero dhaqaale iyo mid militari u siin jirtay dalka Masar ayaa si weyn uga cadhaysan go’aanka Xukuumada Masar ku taageertay qorshaha Qaramada Midoobay (QM) ee xasilinta dagaalka ka socda dalka Suuriya.
Sacuudiga oo taageero xoog leh siiya xoogaga Mucaaridka ah ee ka dagalamaya Suuriya ayaa kasoo horjeeda in wax wadahadal ah lala galo xukuumada Bashar Al-Assad, balse qaar kamid ah xubnaha Golaha Amaanka ayaa taageeraya in wadahadal loo furo Mucaaridka Siiriya ee hubeysan iyo Dowlada Bashar Al-Assad. Dowlada Masar ayaa hada kamid ah 15-ka wadan ee xubnaha ka ah Golaha Amaanka.
Dagaalka Suuriya, Sacuudiga iyo Qatar
Dagaalka Suuriya ayaa la rumeysan yahay inuu salka ku hayo qorshe dheer oo ay damacsan yihiin dalalka Khaliijka gaar ahaan Qatar iyo Sacuudiga oo doonayey inay dhuun shidaal iyo gaaska-dabiiciga ah qaada ay mariyaan wadanka Suuriya iyo Turkiga si ay gaaskooda ugu iib geeyaan suuqa weyn ee Midowga Yurub.
Qorshahan oo loo yaqaan QATAR-Turkey Pipline ayaa diyaarintiisa bilowday sanadkii 2000, waxayna sanadkii 2009 ay ugu danbeyn ku heshiiyeen dalalka Sacuudiga, Qatar, Turkiga iyo Jordan (Urdun), in dhuun qaada Gaaska laga sameeyo dalalkaasi balse waxaa ka hor timid dowlada Suuriya ee Bashar al-Assad oo horey qorshahan wax uga ogeyd, balse heshiiskan ka baxday kadib markii Bashar Al-Assad cadaadis uga yimid dowlada Ruushka.
Ruushka ayaa isagu ah dalka ugu weyn ee Gaaska iyo shidaalka siiya dalal badan oo Yurub ah, dakhliga xukuumada Moscow ayaa 80% ka timaadaa ganacsiga shidaalka iyo gaaska ay ka iibiyaan dalalka Yurub. Ruushka wuxuu u arkaa in qorshaha Qatar iyo Sacuudiga ay dhaawac weyn ku keeni doonto ganacsigooda Tamarta, Gaaska iyo Shidaalka uu siiyo Qaarada Yurub.
Kadib diidmadii Dowlada Bashar Al-Assad ee qorshaha Dhuunta gaaska qaada oo ay wateen Qatar iyo Sacuudiga ayey dalalkaasi khaliijka bilaabeen inay hubeeyaan oo dhaqaale baaxad leh siiyaan kooxaha Sunnida ah ee kacdoonka ka bilaabay wadanka Suuriya sanadkii 2011, dagaalkaasi oo hada noqday mid ay si toos ah usoo galeen Ruushka iyo Dowlada IRAN oo iyaduna kasoo horjeeda damaca Qatar iyo Sacuudiga ee ganacsiga Batroolka & Gaaska ku aadan suuqa Midowga Yurub.
Dowlada Iran ayaa lafteeda dooneysa inay dhisto dhuun shidaalka ay u marsiiso suuqa dalalka Yurub. Waxayna dooneysaa mustaqbalka inay dhuuntaasi sii marsiiso dalalka Ciraaq iyo Suuriya, waxaana u muhiim ah in wadamadaasi ay kasii taliyaan dowladaha ay Shiicada hogaamiso oo ay dusha ka hagto.
Ruushka oo hada awoodiisa militari dul dhigay Suuriya ayaa doonaya inuu ilaashado suuqiisa Batroolka, gaaska uu siiyo Yurub iyo saldhiyada militari uu ku leeyahay dalka Suuriya, halka dalka IRAN oo taageeraysa shiicada xukunta Suuriya ay iyagu laftooda damacsan yihiin mustaqbalka inay ganacsigooda batroolka ku xidhaan qaarada Yurub ayaa kasoo horjeeda mashruuca Qatar iyo Sacuudiga oo uu loolan hoose oo ganacsi iyo mid diimeed uu ka dhaxeeyo.
Sacuudiga ayaa hada u muuqda inuu doonayo inuu ciqaabo dowlada Masar oo ay horey xulafo u ahaayeen oo si lama filaan ah u taageertay qorshaha ka socda Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ee lagu doonayo in lagu hakiyo dagaalka Suuriya.
Bishii April ee sandkan ayey Boqortoooyada Sacuudiga iyo Dowlada Masar ee Cabdifutax Al Sisi ku heshiiyeen in bil walba 700,000 tonnes oo shidaal ah siiyaan Masar, balse bishii Oktoober ee lasoo dhaafay ayey shirkada shidaalka ee Sacuudiga leeyahay ee Aramco joojisay gebi ahaan shidaalkii ay usoo diri jirtay wadanka Masar, waxaana sidaas xaqiijiyey Afhayeenka Wasaarada Batroolka Masar Hamdi Abdel-Aziz.